Ivalve yeBhola, iValve yokuHlola, iValve yeSango-i-Newsway
Ivalve yentsimbi EYENZIWEYO
Sisebenza ngokukhethekileyo kwiivalve zebhola, iivalve zesango, iivalve zetshekhi, ivalve yeglowubhu, iivalve zebhabhathane, iivalve zeplagi, isihluzi, iivalve zolawulo. Iimveliso
API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Ukuba ufuna izatifikethi zethu, nceda uqhagamshelane nathi sales@nswvalve.com )
Imizi-mveliso yePulp kunye nePhepha
AMASHISHINI E-PULP NEPHEPHA
I-Newsway Valve Co., Ltd. ngumenzi weevalvu zemizi-mveliso oqeqeshiweyo kwaye uthumela ngaphandle ngaphezulu kweminyaka engama-20 yembali, kwaye ine-20,000㎡ yocweyo olugqunyiweyo. Sigxininisa kuyilo, ukuphuhlisa, ukuvelisa. IValve yeNewsway ingqongqo ngokwenkqubo yomgangatho wehlabathi jikelele ISO9001 yokuvelisa. Iimveliso zethu zibambe iinkqubo zoyilo ezibanzi ezincediswa yikhompyuter kunye nekhompyuter enobunkunkqele izixhobo zokuvelisa, ukusetyenzwa kunye novavanyo. Sineqela lethu lokuhlola ukulawula umgangatho weevalvu ngokungqongqo, iqela lethu lokuhlola lihlola ivalve ukusuka kumdlalo wokuqala ukuya kwiphakheji yokugqibela, libeka iliso kuyo yonke inkqubo yemveliso. Kwaye sikwasebenzisana nesebe lesithathu lokuhlola ukunceda abathengi bethu ukuba babeke iliso kwiivalvu ngaphambi kokuthunyelwa.
UMZNZI WOBUCHULE WEVALVI ISO9001 INKQUBO YOLAWULO LOMTHETHO IQELA LOBUCHULE EMVA KWEZIBONELELO ZOKUTHENGISA
umenzi wevalvu yobuchwephesha
Inkampani yeNewsway Valve ibizibandakanya kwimveliso yevalvu ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye inamava atyebileyo kuyilo lwevalvu kunye nemveliso. Inkampani yethu igcina imveliso kunye nezixhobo zokusebenza zihlaziywa rhoqo ukuqinisekisa ukuchaneka kwemveliso kunye nokusebenza kakuhle.
Inkqubo yokulawula umgangatho ongqongqo
Ngokwenkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9001, iNkampani ye-Newsway Valve ilawula ngokungqongqo inyathelo ngalinye ukusuka ekugaleleni kwevalvu ukuya kumatshini wokuhlanganisa, ukupeyinta, kunye nokupakishwa ukuqinisekisa ukuba iivalvu ezithunyelwa ngaphandle komzi-mveliso zifanelekile nge-100%.
INkampani yeNewsway Valve ixhotyiswe ngesebe lemveliso, isebe lobugcisa, isebe lentengiso, isebe lomgangatho, isebe lamaxwebhu, isebe lezemali kunye nesebe lokuthengisa emva kokuthengisa ukunceda abathengi ngcono nangokukhawuleza.
Emva kokuthengisa ukuzibophelela
Inkampani yeNewsway Valve ithembisa ukuba: Ukuba abathengi bafumana iingxaki zomgangatho wemveliso, siya kunceda abathengi babonelele ngeenkonzo zokulungisa okanye zokutshintsha simahla. Ncedisa abathengi ukuba bajongane neengxaki ngokukhawuleza